Challenge The Good News Paper - Ukuhamba ngokuKholwa (Zulu)
"Ngangidumele ngiziphilela ngedwa. Kwakunzima ukuthi ngithethelele- ngizonda ngisho nabantwana abancane Ababa ngibheka," usakhumbula.
Emva kweminyaka emibili, esageza emfuleni, indoda ethola yamchazela ngempilo nangokufa kukaJesu nokuthi uJesu angamkhulula kanjani uElifas ezonweni zakhe nakubo ubunzima nemithwalo yakhe.
"Ngakhala isililo esinzima ngavuma ukuthi ngiyisoni. Ngaphaka ubusuku bonke. Ngangi ngazi ukuthi kwaku nomuntu (uJesu) ongithanda ngendlela engiyiyo. Intokozo yafika ngazithola sengamukela abanye abantu futhi ngaqala ukuthokozela impilo," uElifas uyazi ngomkhulu umdlandla.
"Ngangi ngacabangi ukuthi ngiyophinde ngijabule futhi, noms ngiphile impilo ejwayelekile, Kepha uJesu nguyena owashintsha impilo yami. UJesu uwukuphila kwami!"
UElifas uyakhumbula ukuthi ngaleso sikhathi eZimbabwe izibhedlela zakhona wawunikezwa induku yokuhamba uma ukhishwa esibhedlela. "Kusukela ngo 1977-1985 ngangi ngenazo izinduku zokuhamba, ngangi gxuma njenge nyoni, kepha mina ngingu bani ukuthi nginga gcina amagqubu?" Usho kanjalo.
"Ngo 1986 umfowethu, owaye nguthisha, wangithengela izinduku zepulanga izinto zaqala zashintsha empilweni yami."
Omunye udokotela omhlophe wathengela uElifas izinduku zensimbi, azizebenzisayo kuze kube namhlanje, ngo 1994 omunye umzalwane omhlophe wamthengela unyawo lokubabambisa (artificial leg).
Kepha, emva kweminyaka eyishumi lolo nyawo lwaphuka uElifas wazithola futhi ephelelwa ithemba. Wazikhumbuza ukuthi uJesu wathembisa abalandeli bakhe ukuthi uzohlangangabezana nezidingo zabo njengoba ehlangabezana nezidingo zokudla zezi nyoni zezulu nezimbali zigqokise insimu. (Mathewu 6:25-27.)
Ngalesosikhathi uElifas wayengu mfundisi schedule enamadodakazi amathathu. Wahambela isemina (Seminar) ephethwe yi Multi-Ministries endaweni year Chiredzi, ababe qeqesha bekhuthaza abafundisi base Zimbabwe.
Kulezozinkonzo, umfundisi Bartholomew wathembisa ukuthengela uElifas olunye unyawo lokubambisa,uElifas wayese Ningizimu Afrika ukuyolanda lolunyawo ngesikhathi echazela iphephandaba elibizwa ngokuthi iChallenge ngobufakazi bakhe.
"UMusa kaNkulunkulu uyangi nakekela ngaso sonke isikhathi," u yasho uElifas. "Ngiyambonga umfundisi uBartholomew ngoku ngikhombisa uthando. Ngibona izenzo zikaNkulunkulu. Yonke imithwalo yami ithathwe nguJesu Kristu.
"Akekho omunye ongakunika inkululeko nguJesu yedwa. Akekho omunye ongathethelela izono. Ikusasa lami likuJesu liqhakaza ukudlula izolo."•
Loop deur geloof (Afrikaans) >>